Last nohavaozina: Jan. 04 2018 | 3 min namaky
“No tadiaviko, fa ny vehivavy tanora kokoa ny vehivavy indrindra no te hampiaraka olona manodidina ny taona. Inona no azoko atao?” – Anonymous
Ny fanontaniana amin'izao fotoana izao dia avy amin'ny iray amin'ireo mpamaky izay maniry ny hijanona tsy fantatra anarana; Ho azy dia hoe Bill. Vakio ny fanontaniana indray. Mariho Bill no efa resy lahatra fa ny vehivavy tanora mitady tsy ho liana amin'ny olona iray ny taona. Izany no tena finoana manatanteraka izay saika azo antoka ho tanteraka. Raha mino ianao fa lalina dia handeha ho any tsy, dia ho.
Ny tena valin-.
Raha afohezina, eny, afaka tanteraka hahita vehivavy tanora kokoa izay mety aminao. Ianao mila mametraka ny lasibatra, hanao zavatra, ary ny mazava ho azy mijanona.
Inona no hanampy anao hanomboka amin'ny lalana marina?
Voalohany, hijery anatiny lalina sy mijery izay tena hoe nahoana ianao no te-hihaona ny vehivavy tanora. Ary avy eo dia mieritreritra ny zavatra ity vehivavy tonga lafatra dia ho tahaka ny. Mamaritra azy amin'ny antsipiriany betsaka araka izay azo atao mba afaka. Avy eo dia, hanoratra izany teo amin'ny taratasy iray. Lisitra ny taona, endrika ara-batana, toetra, fialam-boly, tiany sy tsy tiany, sns. Raha vao ny efa voalaza ny vehivavy tonga lafatra ho anareo amin'ny tsipiriany lehibe, aforeto ny 'izany taratasy ka ento miaraka aminao ho 1 herinandro.
Aoka hatao hoe efa miaraka aminy. Inona no hataonao? Inona no miresaka momba ny? Aiza moa no halehanao? TENA hahatsapa izany ary dia hidirantsika ny fihetseham-po izany — Inona no tsapanao rehefa ao aminy? Izany rehetra izany dia mety ho toa adaladala, kanefa moa ve fantatrao fa amin'ny alalan'ny fanoratana teo fotsiny izay tianao, ianao hampitombo ny vintana hahazo izany amin'ny alalan'ny 80%!
Eritrereto fotsiny anie izany anankiray ho iray minitra…
“Ny anatry ny fanoratana zavatra nidina no dingana voalohany mba hanao azy io hitranga.”
Ara-tsosialy stigmas ary nahoana no iahianao?
Tsy manao izany ianao. Ny fiaraha-monina dia feno stigmas ara-tsosialy. Sahirana loatra izahay hoe momba “inona ny hafa dia mihevitra” fa matahotra izahay mba hanohy ny nofy ihany. Eny, maro ny olona tia ny mitsara ny hafa, fa izany ny safidy sy ny zo. Nahoana no manao izany izy ireo dia lohahevitra lehibe kokoa ho an'ny andro hafa, saingy tsy tena zava-dehibe eto. Tsy misy olon-kafa afaka angamba mahafantatra izay mety aminao, ka nahoana no mihaino azy?
Ny hendry indray mandeha hoe:,
“Inona no misy olon-kafa mieritreritra ny momba anao akory ny raharaha”.
Marina ve fa ny vehivavy ny ankamaroan'ny olona manodidina ny te mitovy taona?
Izany no marina tanteraka! Raha ny marina dia, Isika tsirairay avy dia samy hafa sy ny hoe tiana, tsy manam-paharoa zavatra ilaina. Ny tanjona sy ny tokan-tena zavatra tokony hifantohana dia fitadiavana ny tonga lafatra ho anareo vehivavy. Vanim-potoana.
5 mora torohevitra ho an'ny tanora niaraka fisarihana sy ny vehivavy.
Matetika ny vehivavy tanora voasarika amin'ny toetra toy ny fahamatorana (toy ny Dada a!), vola bebe kokoa sy ny fiaraha-monina ambony, masculinity, mpitarika fahaiza-, fahatokiana, ary tony, ka zava-dehibe ho anao hifantoka amin'ny toetra ireo whichever anananao.
1) Mijanòna ho ianao ihany.
Rehefa mihaona ry zalahy be taona ny vehivavy tanora kokoa matetika izy ireo no sahiran-tsaina sy manomboka mahazo hanao zavatra tena hafahafa. Aza manao izany — fotsiny ny tenanao.
2) Hitandrina izany fahazavana sy hahafinaritra.
Aoka ianao ho playful. Maka fahafinaretana. Hananihany azy. Dia tsy nanadino ny zavatra toy izany ny hilalao sy goof manodidina. Ho anao dia manao tsara ny mahatsiaro ny sasany tsy mandray izany ho zava-dehibe ny fiainana. Aoka ianao ho adala kely sy hifidy ny zavatra izay ry zalahy tanora amin'ny ankapobeny tsy afaka ny hanao. Ataovy tsy am-pihambahambana. Mifalia.
3) Ho mpitarika. Anie ny olona.
Tanora tena mety hitady olona azo hitarika. Manana traikefa eo amin'ny fiainana kely, ary tena mety ho an'ny olona mitady ny mampiseho azy ireo ny avy tao izay. Ataovy ny daty sy ny drafitra mialoha, fa ho mora mahatsapa sy manontany ny hevitry ny planina izay efa nanao. (Mety ho mahazaka sushi). Aoka ianao ho olona, nefa manaja ny heviny. Fanokafana varavarana, mandeha eny ivelany ny hampihenana ny, ary mitarika avy seza no fomba iray hafa mba hanao vokany be eo amin'ny tanora kokoa ny vehivavy.
4) Aza manao toy ny “perv”.
Tarehy indrindra zatovovavy voadonan'ny tamin'ny sasany mandringa, efa nivadika lehilahy be taona. Aza miezaka ny hifindra amin'ny ela loatra, na mieritreritra izy Ho fotsiny ianao “perv” mitady mba ho ao an-pataloha. Rehefa irery ny miara-, tsy maninona ny manadala ankizilahy, fa aoka hanenjika anao na inona na inona bebe kokoa. Fa raha tsy izany dia mety hanaitaitra izy mianaka;.
5) Omeo azy toerana sasany.
Ny vehivavy tanora kokoa angamba vao avy nahazo ny ray aman-dreniny be ny trano-drafitra ny fiainantsika sy aotra fahafahana. Raha ny tia anao, fa tsy noho ianao famoronana indray ny manempotra tontolo izay sisa fotsiny izy… izany satria maneho zavatra hafa. Omeo azy toerana sasany. Aoka ny olona fa ny Nanonofy foana, ary avy eo dia tsy hanenjika azy. Aoka izy ho avy aminareo.
Mahatsara sy maharatsy ny mifampiresaka Mampiaraka vehivavy tanora kokoa
Inona no vehivavy Eritrereto mandritra ny Firaisana